Emeela GNOME 3.14 [Video] | Site na Linux
Emeela GNOME 3.14 [Video]
GNOME Ọ bụ ebe Desktọpụ kachasị amasị nke ọtụtụ ndị ọrụ yana obere nke nta kemgbe ewepụtara Shell ya, ọ nọ na-etinye mmelite yana atụmatụ ọhụrụ ndị na-etinye ya n'etiti gburugburu ebe Desktọpụ nke oge a.
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ anyị nwere:
Ihe ngosi di mma.
Nkwado ka mma maka Multitouch.
Mmegharị ahụ agbakwunyere 🙂
Mmelite na ngwa Foto nke nwere nkwado maka ilele foto Google.
Enwere ike iji ya chọta ihe nchọta dị ka ihe mgbako, dịka ọmụmaatụ .. (ahem, GRunner?)
Na ụbọchị ole na ole sochirinụ, mgbe ị rụnyere ya Antergos M ga-eme ka a Review, n'ihi na ugbu a, m na-ahapụ video na ozi ọma nke GNOME 3.14 Ekwenyesiri m ike na ndị ọrụ ya ga-amasị ya.
Okwu Mmalite nke GNOME 3.14
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Emeela GNOME 3.14 [Video]
Ghụnanya Gnome, na nke a adịghị ehulata 🙂
Ọ mara mma !
Abụ m onye na-enweghị atụ nke XFCE mana eziokwu bụ na ụmụ Gnome na-arụ nnukwu ọrụ. Karịsịa ihe na-adọta ndị mmadụ na ndị ọzọ na-agbalị desktọọpụ Linux 😀
Ọ dị oke mma ma nwee ekele na ha gụnyere bọtịnụ iji mechie ngwa, mana echere m na m bụ KDE fanboy, yabụ m ga-enyefe ya n'oge a.
Enweghi ike ịkwụsị ọrụ nke ndị Gnome, m ka na-eche na:
- Ọ bụ ezie na maka onye ọrụ oge ụfọdụ (web, egwu, ikiri ihe nkiri) Gnome bụ nhọrọ dị oke mma, n'oge ịchọrọ ịpịpịa PC gị (ọrụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ) ọ naghị enwe ahụ iru ala n'ihi ịdị mfe ya na ọpụrụiche ya ( na onye na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe ya ụzọ o si eme ihe. Hụ ihe atụ, mkpochapu nhọrọ dị na faịlụ na ngafe nke ịdị mfe na ngwa ya.
- Ebe ọ bụ na mbipute 3 anyị chọrọ sinik Gnome Shell dị ka paradigm na desktọọpụ. Mana o doro anya na ihe niile dị na desktọpụ ahụ gbadoro ihu na ihuenyo. Site na itinye mmegharị nke ọtụtụ aka a gosipụtara.
- Ọ bụ ezie na m bụ onye ọrụ Xfce ugbu a, site na m si ele ihe kachasị mma maka usoro desktọọpụ ọkachamara bụ na ọ ga-anọgide na-abụ KDE ruo oge ụfọdụ.
N'aka nke ọzọ, dịka m kwuworo, ọ bụ echiche dị mfe ma achọghị m iwepụ ọrụ nke ndị mmepe Gnome, ebe ha na-arụ nnukwu ọrụ na ọ bụ ụzọ ha si aghọta desktọọpụ.
Ekele na ekele nye otu Gnome!
Ọ dị gị ka nke a, n'ihi na ịnwalebeghị ya n'ezie.Gịnị m na-agwa gị bụ Gnome bụ gburugburu ebe m na-arụ ọrụ karịa nke ọ bụla na gburugburu ebe obibi ọ bụla.na iji mee ka ọ dị mma karịa, wụnye mgbakwunye abụọ:
Ana m akwado ịnwale nsụgharị 3.10, 3.12 ma ọ bụ 3.14 iji hụ n'onwe gị ihe m na-ekwu. Abụ m onye ọrụ XFCE na KDE ma echere m dị ka gị n'oge gara aga ..
Ma eleghị anya, ọ bụ ihe gbasara ịmalite ime ihe ahụ. Ejirila m Gnome n'ọtụtụ oge (3.2, 3.4) na enweghị m ike ịmị mkpụrụ dị ka Xfce ma ọ bụ KDE. Otu ihe ahụ na-eme m na Mac OS X. Enweghị m ike iji ụzọ desktọpụ ndị a rụọ ọrụ. Enweghị nhọrọ karịrị m ike na ọ dị m mkpa ịgwa onye ọrụ ahụ otu esi eme ihe.
Ọbụna ma ọ bụrụ na nsụgharị ndị i jiri mee ihe kachasị ochie, ọ dịghị mkpa, ebe ọ bụ na anaghị m ekpebi arụmọrụ ahụ, ma ọ bụ ngwa ahụ. Enweghị m ntụsara ahụ maka etu Gnome Shell si eme ihe.
N'agbanyeghị nke ahụ, anaghị m agọnahụ na maka ndị ọzọ ọ dị mma ma na ọ bụ ezigbo gburugburu ebe obibi. Ọ bụghị naanị maka m.
M na-eji shei gnome kwa ụbọchị eme ihe n'eziokwu, ọ dị ka nzuzu nzuzu, akpọrọ m asị na enwere ngwa yana menu nkịtị, ndị ọzọ anaghị eme ya, mgbe ahụ adwaita isiokwu na ọ dị oke njọ n'anya m, na mgbakwunye na gburugburu ebe obibi Ọ na-eme m arọ mgbe awa ole na ole jiri.
Ndo ma okwu gi bu spam, aguru m gi n’ebe di iche iche, taringa, muylinux na blog ndi ozo. Daybọchị ọ bụla ị na-akpọsa X distro na Y desktọọpụ gburugburu ebe obibi. Agụọla m okwu nduhie iji kde na slackware, nakwa nauseuse, fedora na centos, n'ezie ị nwere ike ịgbanwe obi gị, mana nke a adịla ka egwuregwu.
Ebe ahụ dijo
Ana m edebanye aha n'okwu ọ bụla ị kwuru.
Zaghachi ka dago
Nnọọ, kedu ka ị mere? Enwerem ajuju, ugbua m na eji Ubuntu GNOME 14.04 ma onwere GNOME 3.10.4 odi na odika imalite na 3.14? nakwa n'ụzọ dị a ?aa? ebe m ga-achọ ịnwale ụdị a nke na-egosi ekele dị mma
Ukechukwu 20 dijo
Enwere ppa 2 m na-eche maka otu Ubuntu Gnome ahụ nke na-enye Gnome Shell na nso nso a, m nwalere ppa (gnome3-staging) ebe Gnome 3.12 dị na eziokwu ahụ bụ na m ka nke ahụ mma (3.10) ).
Ebe nchekwa ọzọ, nke m na-echetaghị aha ya, amaghị m ụdị ụdị Gnome ọ nwere kemgbe achọghị m iji ya n'ihi na ọ ka karịa, ma ọ bụ ka anyị kwuo, ejighị n'aka na echere m na ọ bụ ya mere ọ ga-eji nwee ụdị ọhụụ
Onwe m, enweghị m ike ichere ka ọ pụta na Arch, abụghị m onye ọrụ Gnome 2.4% n'ihi na m na-eji CInnamon dị ka okpokoro desktọọpụ m, CInnamon bụ desktọọpụ kachasị amasị m na onye ọ bụla maara nke ahụ mana ime ihe n'eziokwu, Gnome na-amasị m kwa ụbọchị ma na shei na ngwa; Ekele m nye ndị Gnome n’eziokwu enweghị ike ichere iji ya na Cinnamon XNUMX na Antergos 😛
Zaghachi Sergio E. Durán
M zụtara ya 😀
M na-ahụ ya otu ihe ahụ 🙁
Thebọchị ị ga-ahụ mgbanwe ga-abụ mgbe ị nwere ike idozi obosara na ịdị elu nke ogwe ahụ (dịka ọ dị na Gnome2).
Enwere olile anya na ha dozie nsogbu nke akaụntụ ntanetị ebe ọ bụ na enwere m nsogbu ụfọdụ na nke ahụ na Antergos na gnome ugbu a.
Ahụrụ m ya ma ekwetaghị ya. Ruo ugbu a, GNOME a na-eme nke ọma karịa ndị bu ya ụzọ.
Aga m anwale ya na Arch ozugbo m nwere ike.
Ọ bụghị ihe ọjọọ, mana achọpụtara m na ọ na-agwụ ike ma na-agwụ ike ... ka na-ejedebeghị na customizable ... M ka na-na kde.
M na-anwale ya na wayland, ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu. Njikọ ala nke wayland ka nwere (dịbu: ntọala ntọala), mana o doro anya na ha nọ n'ụzọ ziri ezi.
Ọ naghị adị njọ mana ọ masịrị m kpochapụwo ma ọ bụ ya mere m ji eji XFCE n'ihi na ọ na-enye m ohere ịgbanwe desktọọpụ m dị ka o masịrị m, nke na GNOME anaghị ekwe ka m gbanwee ihe ọ bụla.
Zaghachi ka mrcelhw
Gnome na-egosi oge ọ bụla na nhazi 8 ahụ, ihe ọjọọ banyere gnome na-eri ọtụtụ akụ sitere na PC na sistemu ahụ kwụgidere, otu ajụjụ ... gịnị kpatara na Debian Wheezy na gnome ... emela taabụ ma ọ bụ bulie ma belata mkpọchi pụtara na windo ịntanetị?
Na-agbasa ozi ọma na Linux Software, ndị ọkachamara dọrọ aka na ntị na nsogbu nchekwa na nso nso a nke Linux Software, nke a maara dị ka Bash, nwere ike bụrụ ihe iyi egwu dị ukwuu nye ndị ọrụ karịa Heartbleed flaw, ndị na-agba ọsọ nwere ike iji ya mee ihe. njikwa usoro, ndị ọkachamara nchekwa na-ekwu.
Maka na ọ bụrụ na iji forefox ma ọ bụ (iceweasel) ị ga - ahụ na enwere isiokwu (gnome theme tweak) nke na - ejikọ ihe nchọgharị ahụ na taabụ, ọ bụ ya mere na ọ pụtaghị (ma ọ bụ chiiz, mana ọ dị obere na akụkụ aka nri nke ihe nchọgharị ahụ , ị ka nwere ike iji ụzọ mkpirisi site na keyboard)
Enwere m xfce na enwere m ya agwakọta ka ọ ghara iwepụ ohere ahụ dị oke ọnụ, yana gmome ọ na-apụtakarị na-akpaghị aka
Ozi oma: D.
Kedu ihe kpatara na m na-achọ Pantheon karịa Gnome Shell n'onwe ya?
Ọ dịghị ihe m nwere ike ịnwale ya, ọ dị mma
Azịza nye -----
Enweghi ike ịhazi ya, ọ na-erepịa karịa KDE. N'ihu ya ka odi oke. Echere m na anaghị m ahapụ KDE, ọbụnakwa na-ata ahụhụ na-aga n'akụkụ tomato
Gnome 3.12 edozila nsogbu nke Gnome 3.10 ma ugbu a na Gnome 3.14 M na - ahụ ọzọ na igwe m adịghị nwayọ ma na - agbatị oge ụfọdụ: /
Bash: achọpụtara ọhụụ ọhụụ (ma dozie)